Manchester City oo laga mamnuucay tartamada Yurub labo xilli ciyaareed ee soo socda… – Hagaag.com
Posted on 14 Febraayo 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Kooxda heysata horyaalnimada Ingriiska ee Manchester City ayaa laga mamnuucay tartamada Yurub labada xilli ciyaareed ee soo socda, waxaana lagu ganaaxay 30 milyan euro ($ 32.53 milyan) oo ka yimid guddiga Yurub ee UEFA ka dib baaritaan lagu sameeyay oo lagu eedeeyay inay jebisey sharciga dhaqaale wanaaga ciyaaraha (FFP).
Haddii go’aankan lagu adkeysto, waxay macnaheedu noqonaysaa in kooxda Pep Guardiola aysan awoodi doonin inay u tartamaan tartamada Champions League ee 2020-21 haddii ay markale u soo baxaan tartamada kooxaha Yurub. Sidoo kale waxaa laga mamnuucay tartamada Yurub xilli-ciyaareedka 2021 -22.
Ka maqnaanshaha ciyaaraha qaaradda waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa dakhliga kooxda iyo sidoo kale sumcadooda.
Xeerarka Uefa ee FFP waxaa loogu talagalay inay ka hortagto naadiyada inay helaan lacago aan xadidneyn iyada oo loo marayo qandaraasyo kafaala qaad ah oo lala galay ururro la xiriira milkiilayaasha.
Garsooraha Rugta UEFA ee (CFCB) ayaa sheegay in City ay jabisay sharciyada “iyadoo aad u sareeyay dakhligeedii kafaaladeed ee akoonadeeda iyo sidoo kale warbixintii loo gudbiyey UEFA intii u dhaxeysay 2012 iyo 2016 oo lagu xadgudbay” waxayna intaas ku dareen in kooxda “ay ku guuldareysatay inay iskaashi ka sameyso baarista “.
Laakiin City, oo dafirtay oo sheegtay inaan wax qalad ah aanan sameyn, ayey si adag jawaab uga bixisay, waxayna sheegeen in ay ka dagaalami doonaan go’aanka.
“Marka si fudud loo dhigo, kiiskani waa mid ay agaasintay UEFA, oo dacwad ooge ka aheyd UEFA, isla markaasina xaakim ka aheyd UEFA. Nidaamkan cadaalad darrada ah haatan waa la soo afjaray, Naadiga ayaa sida ugu dhaqsaha badan u qaban doona garsoore dhexdhexaad ah sidaas darteedna, marka ugu horeysa, waxaa bilaaban doontaa dacwada maxkamadda Xalinta Khilaafaadka Sport-ga fursada ugu horreeysa,” sidaasi kooxda ayaa tiri.